LAGU SAMEEYO Edgley Optica FSX & P3D - Rikoooo
downloads 17 516
Craig Richardson, Pam Brooker. Waxaa cusboneysiiyay Bob Chicilo
Updated on 04 / 07 / 2020 : Cusboonaysiinta loogu talagalay FSX Edgley Optica waxaa qoray Craig Richardson. Guddi cusub oo 2D ah oo sawir ka qaaday VC. Waxaa lagu daray dhibcaha xoqidda iyo giraangiraha hagaajinta; beddelay cabirka iyo booska GPS-ka; dariishado dari raadiyeyaasha iyo xiiran; Cusboonaysiinta dhaqdhaqaaqa duulimaadka. Cusboonaysiinta waxaa sameeyay Bob Chicilo.
Native add-on waayo, FSX/P3D tayo wanaagsan leh oo runtii asal ah, moodada 3D aan cilad lahayn.
Optica The, loogu talagalay by John Edgley oo la dhisay by Brooklands Aerospace, lahaa qaabeynta aan caadi ahayn la qol si buuxda glazed weeraryahanka fariisin saddex guud ahaan, garabaka helicopter Alouette ah. Behind waxaa la taalaa Lycoming guri lix engine a laadyo taageere ducted ah, oo mataano tailplane cantilever kaca la shukaanaha ku mataanaha iyo wiishka hal sare-dhajinta. bishkleetiga The go'an undercarriage lahaa nosewheel ku kabayso bidixda. baalashooda waxay ahaayeen unswept iyo untapered, iyo diyaaradda ahaa dhismaha oo dhan-biraha si caddaalad ah caadiga ah harag aluminium carabka ku adkeeyay. muuqaalka kala diyaaradaha ee keentay in loo yaqaan "cayayaanka-il" in qaar ka mid ah wararka loo jecel yahay.
Crew: Mid ka mid ah pilot
rakaab 2: Capacity
The Raven: 12.0 m (39 ft 4 in)
Dhererka: 2.31 m (7 ft 7 in)
aagga Wing: 15.8 m² (171 ft²)
miisaanka madhan: 948 kg (2,090 LB)
load Faa'iido leh: 367 kg (810 LB)
Max. miisaanka duushay: 1,315 kg (2,900 LB)
Powerplant: 1 × Textron Lycoming IO-540-V4A5D guri lix engine qalab,
Propellers: shan dagan rafaasad taageere ducted, 1 per engine
Qore: Craig Richardson, Pam Brooker. Waxaa cusboneysiiyay Bob Chicilo